Ifulethi # 1 Ilungiswe kabusha indlu yedolobha lasendulo - I-Airbnb
Ifulethi # 1 Ilungiswe kabusha indlu yedolobha lasendulo
Talarn, Lleida, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Benjamí
U-Benjamí Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Nov 18.
I-oasis yokuthula eseduze nemvelo enazo zonke izinsiza zesimanje (i-wifi...), uma ufuna indawo ethule enemisebenzi eminingi yangaphandle engenzeka (kodwa futhi uvakashela ezinqabeni, ezindaweni ezigcina iwayini noma indawo ehamba phambili yokuhlola izinkanyezi eCatalonia) , LENA INDAWO YAKHO.
Sinikeza amafulethi amane amancane endlini yedolobha yasendulo elungisiwe, yabantu abangashadile, abathandanayo, noma umndeni onengane.
Leli fulethi linompheme obheke isikwele sesonto eTalarn, elinamavulandi alo asendulo, umthombo okhencezayo kanye nomkhombe wokunisela wendabuko. Kuyi-studio enendawo enkulu okuhlanganisa ikhishi, indawo yokudlela, indawo yokuhlala, umbhede ophindwe kabili (okungenzeka kube nombhede owengeziwe), usofa ongashintshwa ube umbhede ongu-140 cm ububanzi, ikhabethe lezingubo, ideski. Isitofu sePellet. Ziqukethe negumbi lokugezela eliphelele elinomshini wokuwasha. Imishayo yokhuni elungisiwe ihlobisa usilingi.
Wonke amafulethi ane-parquet yaphansi. Ukulungisa kwaqedwa ngo-2013 ngakho konke ukufakwa kukagesi kuyasebenza, okuhlanganisa ama-inter-phone, nama-aerial we-TV nomsakazo.
Eduze kunezindawo zokudlela ezintathu ezinhle kakhulu namabha anikezela nge-gastronomy yendabuko, kanye nedamu lokubhukuda lomphakathi elinesevisi yebha elibuye livulwe ebusuku ngezimpelasonto.
I-Talarn, idolobha elidala elibiyelwe ngezindonga, itholakala enkabeni yesifunda sasePallars Jussà, lapho umuntu engakwazi ukuhlanganyela emisebenzini eminingi yangaphandle. Kulabo abathanda ezemidlalo kukhona ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngesikebhe, i-kayak, ukugibela, i-speleology, i-rafting, ukudoba, ukuzingela nokukha amakhowe. Kubabukeli bemvelo kukhona izinyoni, ama-chamois, izinyamazane izinyamazane nezindluzele ezinezifutho zazo zokukhwelana. Ukushayela imizuzu emihlanu kukufikisa edamini lase-Sant Antoni lapho kutholakala khona ukubhukuda nemisebenzi eminingi yasemanzini, kanti i-Sant Maurici i Aigüestortes National Park iqhele ngehora elilodwa nje.
Lesi sifunda sinikeza nemisebenzi eminingi yamasiko neyokungcebeleka. Iwayini linganambitha uma uvakashela izivini ezihlonishwayo zaseCastell d'Encús, García Muret, Sauvella kanye neVilacorona. Izigodlo zika-Mur, Llorda, Orcau kanye ne-St. Gervàs, kanye namasonto othando e-Llimiana, i-Abella de la Conca, ne-Covet kufanele ukuvakashelwa njengoba kuyisiko elihlukanisiwe le-Boí Taüll. Thatha uhambo lwesitimela olulandela indlela yomfula iNoguera namachibi. Ungaphuthelwa ukuvakasha okuqondisiwe kwe-Salàs de Pallars nezitolo zayo zasendulo, ezifaka igrosa, umuntu ogunda izinwele nosokhemisi. Bheka ngesibonakude sesimanjemanje endaweni yokuhlola eMontsec. Kuningi okumelwe ukwenze!
ubusuku obungu-7 e- Talarn
4.68 out of 5 stars from 92 reviews
4.68 · 92 okushiwo abanye
ITalarn, idolobha elidala elibiyelwe ngodonga, isenkabeni yePallars Jussà kanye neGeoparc Conca de Tremp- Montsec. Idolobhana elithokomele elithule ngokwedlulele (kodwa uma "i-fiesta mayor" yenzeka!) enezindlu eziningi ngaphakathi kodonga oludala, imigwaqo emihle enamatshe kanye nemibono emangalisayo. Inezinsiza ezimbalwa (izindawo zokudlela ezi-2 kanye nekhemisi elilodwa elingavulwa usuku lonke) kodwa i-Tremp iqhele ngekhilomitha elilodwa kuphela, futhi lapho ungathola noma yini ongase uyidinge (Isikhungo Sezempilo, Isibhedlela, amakhemisi, izitolo, izitolo ezinkulu...). E-Talarn kunechibi lokubhukuda elihle lomphakathi elinemibono emihle kanye nebha evamise ukuvulwa kusihlwa.
I-Talarn itholakala enhliziyweni yesifunda sasePallars Jussà, lapho umuntu engakwazi ukuhlanganyela emisebenzini eminingi yangaphandle. Kulabo abathanda ezemidlalo kukhona ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngesikebhe, i-kayak, ukugibela, i-speleology, i-rafting, ukudoba, ukuzingela nokukha amakhowe. Kubabukeli bemvelo kukhona izinyoni, ama-chamois, izinyamazane izinyamazane nezindluzele ezinezifutho zazo zokukhwelana. Ukushayela imizuzu emihlanu kukufikisa edamini lase-Sant Antoni lapho kutholakala khona ukubhukuda nemisebenzi eminingi yasemanzini, kanti i-Sant Maurici i Aigüestortes National Park iqhele ngehora elilodwa nje.
Asihlali sikhona (siyakuthanda ukuhamba!) kodwa sizojabula kakhulu ukukusiza ngocingo uma kukhona ongase ukudinge. Sithanda ukukunikeza izeluleko eziningi zokuthi uye kuphi, uzodla kuphi, njll... Ungangabazi ukusibuza nganoma yikuphi ukungabaza okungenzeka ube nakho. Sikhuluma kahle iSpanishi, isiCatalan, isiNgisi nesiFulentshi.
Asihlali sikhona (siyakuthanda ukuhamba!) kodwa sizojabula kakhulu ukukusiza ngocingo uma kukhona ongase ukudinge. Sithanda ukukunikeza izeluleko eziningi zokuthi uye kuphi, uzodla…
UBenjamí Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: HUTL-000403
Hlola ezinye izinketho ezise- Talarn namaphethelo